Seychelles dia nanangona ny fivorian'ny CAF an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eran'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Seychelles dia nanangona ny fivorian'ny CAF an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eran'izao tontolo izao
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Minisitra Didier Dogley & fizahantany PS Anne Lafortune ao amin'ny UNWTOGA: Fivoriana CAF faha-63 nifindra tany Seychelles - Sary nahazoana alàlana avy amin'i Andriamatoa Kojo Bentum-Williams sy VoyagesAfrique
Ny nosy mahafinaritra ny Repoblikan'i Seychelles dia voamarina ho firenena handray ny vaomiera faha-63 ho an'ny fivoriana Africa (CAF) amin'ny taona 2020.
Ny fanapaha-kevitra dia vita taorian'ny firenena mpikambana tao amin'ny fivorian'ny kaomisiona 62 natao teo an-tsisin'ny 23 vao nifarana UNWTO Nanaiky ny fangatahan'ny firenena ranomasimbe Indianina ny fivoriamben'ny vondrom-paritra indianina mba handray ny fivoriana lehibe natrehin'ny mpitarika ny fizahantany afrikanina.
Ny filohan'ny vaomiera, Najib Balala any Kenya, dia namaky ilay volavolan-dalàna ary rehefa avy tsy nisy fanoherana ny mpikambana dia niroso tamin'ny famindrana ny volavolan-dalàna izy.
Ny fivorian'ny vaomiera afrikanina dia atao isan-taona ao anatin'ny hetsika ara-dalàna ataon'ny UNWTO.
Ny Vaomieram-paritra UNWTO ho an'i Afrika no sehatra andrim-panjakana lehibe indrindra izay ifanakalozan'ireo minisitera misahana ny fizahan-tany ny fironana farany misy eo amin'ny sehatra kaontinantaly sy manerantany ary ny fampiharana ny fandaharan'asan'izy ireo.
Hanambara ny daty tsy ho ela ny firenena miaraka amin'ny UNWTO.
Ny minisitry ny fizahantany, seranana an-dranomasina ary ny seranam-piaramanidina Hon. Didier Dogley, izay nitarika ny delegasion'i Seychelles, dia nilaza fa "manantena ny hampiantrano ny vondrom-piarahamonina fizahan-tany ny nosy mandritra ny fivorian'ny komisiona."